प्रवास: युएईमा बनभोजको सिजन, रमाईलो पनि उत्तिकै, समस्यापनि त्यत्तिकै ! – ebaglung.com
२०७४ माघ २१, आईतवार ०७:१४	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
खिमलाल पाण्डे, युएई २०७४ माघ २१ । रोजगारीको शिलशिलामा युएई भित्रिने नेपालीहरुको संख्या बिगतमा भन्दा ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय नेपालीहरु भिजिट भिजामा युएई छिर्ने गर्दछन भने कतिपय कम्पनीको इम्प्लोवाएमेन्ट भिजामा युएई भित्रिने गर्दछन । युएई भित्रिए लगत्तै आफ्नो नजिकका यानिकी जिल्लावासी क्षेत्रवासी मान्छेको खोजी गर्ने गर्दछन् । एक आपसमा चिनाजानी भेटघाट पछी एउटा समूह नामाकरण गरि संस्था स्थापना गरिरहेको पाइन्छ । करिब सयौका हाराहारीमा स्थापना भएका नेपाली जिल्लागत साथमा जातीय, गाबिसस्तरीय लगायत सहकारी संस्था सबैले केहि महिना अगाडी देखि युएईका बिभिन्न स्थानहरुमा खुल्ला बनभोज तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आइरहेको देखिएको छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले आम जन मानसमा कहिँ कतै प्रभाब त पारेको छैन ।
यस बारे युएईमा खोलिएका संघ संस्थाहरुले बुझ्न जरुरि छ, किनकि युएईमा स्थापित संघ संस्थाहरुले आयोजना गरिएका बिभिन्न पिकनिकहरुका बारेमा सामाजिक संजालमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी नआएका होइनन् । प्राय जसो बनभोज युएईका लागि पर्यटकीय क्षेत्र मानिने स्थानहरु रश अल खेमाह, अल ऐन, फुजेरह, खुर्पा खान , डिब्बा लगाएतका डाडाकाडा, खोल्सा खोल्सी जस्ता स्थानहरुमा गरिएको देखिन्छ । जहा कुनै पनि सुबिधाको पहुच हुदैन । नत एम्बुलेन्सको सुबिधा हुन्छ नत कुनै सुरक्षाको । मात्र हुन्छन संस्थाका पदाधिकारीहरु र उपस्थित जनामानस । पिकनिकमा पुगेका कुनै पनि ब्यक्ति अचानक बिरामी परेमा के संस्थाले तुरुन्त स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन सक्ला त रुकि एम्बुलेन्स पनि तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सक्छ ?
यो बिषयलाई छोडौ अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ, अबैधानिक यात्रा । युएईको परिबेशमा कुनै पनि सरकारी यात्रुबाहक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनमा यात्रा गर्नु अबैधानिक हुने गर्दछ । कम्पनीको सवारी साधनमा कम्पनीकै मजदुर बाहेक अरु कोहि पनि सवार गर्न पाइदैन । जहा सवारी गर्दा कुनै पनि दुर्घटना भए कसले जिम्मा लिन्छ रुतर यहा के भईरहेको छ भने सामाजिक संस्थाले पिकनिकको आयोजना गर्ने त्यो पनि पाएक पर्ने ठाउमा होइन सातकोष टाढा करिब दुई तिन घन्टाको यात्रा पछी मात्र सम्बन्धित ठाउमा पुग्न सकिन्छ । जनतन पुग्न त पुगियो पुगे पछी पनि पिकनिकको नाममा अनेक किसिमका बिकृतिहरु भईरहेको नाम नखुलाउने शर्तमा युएईमा कार्यरत बुद्दिजिबिहरु बताउछन ।
यस्तै पिकनिकमा जाने एक जना पुरुष सन्तोष ९नाम परिबर्तन० भने म ७५० दिहराममा काम गर्ने मजदुर हु । जनतन ओभरटाइम चले १००० सम्म आउछ नत्र ८५० र ९०० सेलरी थाप्छु । तर आफ्नै जिल्लाको संस्थाले पिकनिक राखेको हुनाले म ६० दिहराम शुल्क अनि अलकुज देखि दुबई सम्म १० दिहराम तिरेर आएको हु । त्यस्तै पिकनिकमा पुगेकी एकजना महिला सुनिता ९नाम परिबर्तन० ले भनिन मेरो सेलरी १२०० छ । म अबुधाबी देखि राश अल खेमाह पिकनिकमा जानको लागि आएकी हु , अबुधाबी देखि दुबई सम्म आउनको लागि मलाई करिब ४० दिहराम जति लाग्यो नास्ता सहित अझै यहा देखि पिकनिक सम्म पुग्नको लागि ६० दिहराम भनिएको छ उनले भनिन् । किनकि मेरो आफ्नै जिल्लाको संस्था भएकाले म यो पिकनिकमा आएकी हु नत्र यति खर्च गरेर आउने थिएन ।
युएईमा हुने हरेक प्रोग्राममा यस्ता समस्या नदेखिएका पनि होइनन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा पनि यस्ता खालका समस्याहरु देखिएका थिए । संस्थाले युएईको बरदुबई स्थित होटेलको सभाहलमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हुन्छ तर उक्त कार्यक्रम हेर्न मजदुरहरु युएईको चर्चित स्थानहरु दुबई शारझाह अबुधाबी लगाएत अन्य बिकट ठाउहरु अल ऐन, राष अल खेमाह, फुजेराहका डाडाकाडाहरु जस्ता ठाउहरुबाट आउनु पर्ने हुन्छ जहा पुग्नको लागि युएईका कुनाकुनामा कार्यरत त्यहा सम्म पुग्न निकै कठिनाई र खर्चिलो भएको पिडितको गुनासो छ । जहा सम्म पुग्नको लागि न्युन सेलारिमा काम गर्ने मजदुरहरुले आर्थिक समस्या समेत पर्ने गरेको बताउछन । उनीहरु भन्छन संस्थाले पाएका पर्ने ठाउहरुमा फरक फरक समयमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरे हामि सबैले भरपुर मनोरंजन लिन सक्ने थियौ ।
गत हप्ता युएईमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले बनभोज आयोजना गरे । जहा बिभिन्न सांस्कृतिक तथा अन्य खुलकुद समेत खेलाइएको थियो । जहा सयौ नेपालीको उपस्थिति समेत देखिन्थ्यो ।
पाल्पाली समाज युईइको बनभोज
युएईमा करिब तिन साल देखि क्रियाशील सामाजिक संस्था पाल्पाली समाज युएई अन्तर्गत दुबई क्षेत्रिय समितिको आयोजनामा युएई स्थित जाबेला पार्कमा युएई ब्यापी बनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भन्यो ्रजहा करिब ३०० जना भन्दा बढी नेपालीहरुको उपस्थिति देखिन्थ्यो ।
जहा नेपाली स्वादमा खाना तयार पारिएको थियो भने साथमा दोहरी, डिजे हाजिरजवाफ र खेलकुद सहित मनोरन्नात्नक तरिकाले उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।
जन सम्पर्क समिति युएईको बनभोज
राजनैतिक आश्था बोकेको संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईले पनि गत हप्ता नै बनभोजको आयोजना गरेको थियो । उक्त बनभोजमा पनि सयौ नेपालीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । जहा नेपाली राजदुताबास अबुधाबीका कार्यबाहक राजदुत सागर प्रसाद फुयाल, श्रम काउन्सिलर भेष बहादुर कार्की, श्रम सहचारी मोतीराम भुषाल,तृतीय सचिब नारायण ज्ञवाली लगायत सिस्नु पानी नेपालको कलाकार मनोज गजुरेल, डा।रबिंद्र समीर लगाएतको उपस्थिति रहेको सभापति चित्र के सीले बताएका छन् ।
झापाली समाज युएईको बनभोज
युएईमा मात्र नभएर नेपालको झापामा समेत आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल झापाली समाज युएईले पनि गत हप्ता अबुधाबीमा बनभोज कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार अबुधाबीको खालिफा पार्कमा आयोजित वनभोजमा झापाली समाज आवद्ध र अन्य संघसंस्थाका गरि करिब ६ सय भन्दा बढी नेपालीहरुको उपस्थिति रहेको झापाली समाज युएईले जनाएको छ । उक्त वनभोजमा सहकार्य गर्दै लाईफकेयर अस्पताल अबुधाबीले वनभोज स्थलमै ३ सय ५० जनाको निशुल्क स्वास्थ परिक्षण समेत गरेको झापाली समाजले जनाएको छ ।
युवा संघको वनभोजमा कार्यकर्तालाई उत्साहित भएर लाग्न पाईजाको निर्देशन